Ajụjụ Akwukwo Nso nke Acoustic
Jiri ihe eji eme ihe
Ndị nnabata TSG akwadoro
Uzo Mgbasa Ozi nke Roftop
Gaa Leta Blog anyị Maka Mmelite Na Ihe Na-aga
Dramatically belata Noise mmiri ozuzo na a ọ bụla metal ma ọ bụ ndị ọzọ siri ike n'elu ulo Structure
Nri mmiri Ọkụ Abụụrụ Gị Nsogbu?
Anyị nwere Ngwọta anyị, Gaanụ
Mbibi O2 Arena kpatara n'oge Storm Eunice. Ike nke oke ifufe ahụ mebiri akụkụ nke elu ụlọ nke ebe mgbakọ ahụ, nke a na-akpọbu Millennium Dome, na 18 February 2022.
Otu ajụjụ a na-ajụ Silent Roof Ltd n'usoro iwur ndabere bụ
"Kedu ka nwụnye Silent Roof siri dị na ọnọdụ ihu igwe na-efe efe?" Onyonyo dị n'elu bụ nke nrụnye Silent Roof na nso nso a ewepụtara obere oge ka oké ifufe Eunice gafere na UK. Nrụnye ahụ dị n'ala nke 10 nke ụlọ na-ekpuchi ihe ndị ahụ. Obi dị anyị ụtọ ịkọ akụkọ, dị ka ị na-ahụ, ọ bụghị nke a ma ọ bụ nrụnye anyị ọ bụla emechara enwetaghị mmebi ọ bụla n'ihi oke mmiri ozuzo Eunice ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke oke mmiri ozuzo na nso nso a nke 2021-22.
Lelee ibe Facebook anyị ebe a
Vidiyo vidiyo a na-egosi ndị nrụpụta anyị họpụtara TV & Studio Group, na-etinye akara ngosi stencilled n'elu elu nke nrụnye Silent Roof. Ụlọ ihe nkiri London.
Onyonyo ole na ole na-egosi nwụnye Silent Roof ka a na-eme n'ala nke iri nke ụlọ. Obere dị iche na ọnọdụ a na-emebu.
Anyị nọ na Silent Roof bụ naanị ndị na-ebubata Silent Roof nke ụwa anyị na-ebelata oke mmiri ozuzo na-esite n'elu ala. Anyị dabere na ndịda ụsọ oké osimiri nke UK, ụlọ ọrụ anyị debara aha dị na Torquay, Devon, UK. Anyị na-arụ nrụnye na UK niile na-erughị oke ụfọdụ ma na-enye ndị installers ihe ụwa anyị pụrụ iche. Nwere mmasi igwa anyi okwu banyere oru gi? Nwere mmasị na mbupụ? Lelee anya n'ihu na ibe a, ma ọ bụ kpọọ anyị.
Ekwentị: 01803 203445 Ekwentị: 077865 76659
Otu esi akwụsị mkpọtụ mmiri n’elu ụlọ igwe.
Anyị na Silent Roof arụpụtawo ihe ga-edozi nsogbu nke mkpọtụ mmiri na-esite na elu ụlọ siri ike banye na ebe obibi ma ọ bụ ebe ọrụ dị n'okpuru. Anyị na-eji ihe teknụzụ Ntanetị Mbelata Rịọn Mịnịstrị na sọks dị ka Profaili Metal Metal Profa na ihe ndị ọzọ.
Ozugbo etinyere oghere dị n’elu elu ụlọ a lekọtara anya na-erite uru ozugbo site na mbelata dị egwu mmetọ mmiri. Ihe onyonyo di na saiti a bu ihe omuma banyere otu esi etinye SRM na nnukwu ulo oru profaịlụ na Mmanụ thelọ Mmanụ Mmanụ na Southall, London, na Septemba 2018, mita 5400 niile nke ya.
Ntọala flọ Mgbasa Ozi Profaịlụ
Mgbasa Nlọ Mkpokọta profaịlụ - Mbelata mmiri ozuzo
N'ọnọdụ ebe mkpọtụ mmiri na-ekwu na profaịlụ ígwè ma ọ bụ ihe mkpuchi ụlọ mejupụtara na-emetụta oghere ọrụ dị n'okpuru, kpọọ anyị oku na Silent Roof,
anyị nwere ihe ngwọta nye nsogbu gị. Na njikọta nke onye na - eme ụwa nke na - emepụta ihe mkpuchi ihe atọ nwere usoro Silent Roof System, etinyere n’elu ụlọ gị nke dị adị Dramatically belata mkpọtụ mmiri tupu ọ eme. Noisezụ mmiri ozuzo n’elu ụdị ụlọ ndị a bụ mkpọtụ n’ọtụtụ ebe dị iche iche; ngalaba ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ, mpaghara filing, ụlọ ọrụ azụmahịa na ihe ndị yiri ya. Ihe onyonyo a na saịtị a bụ ihe atụ nke otu esi etinye SRM na nnukwu ụlọ profaịlụ ụlọ na Mmanụ Honeylọ Mmanụ Mmanụ Na Southall, London, na Septemba 2018 , iri-nari iri-ise na ise.
A na-eme ngwa ọgbụgba Silent ngwa ngwa na arụ ọrụ ntinye niile na mpụga nke ụlọ ahụ ka ị ghara itinye aka na ọrụ ndị dị n'okpuru ụlọ a.
Mgbasa Ozi Rooftop Na-acha
EE, EE Silent Roof Rooftop Rooftop dị n'ọtụtụ agba. Nwee akara ụlọ ọrụ gị n'elu ụlọ ọ bụla. Enweghị eserese, wepu ma bugharia n'oge ọ bụla. UV kwụsiri ike.
N'afọ 2019, otu ụwa zuru ụwa bịara site na ụlọ ọrụ nrụnye onye jụrụ ajụjụ a, 'kedu ụdị agba ndị ọzọ dị?'
Mana nyocha a abụghị maka iwepụ mkpọtụ mmiri mana ebumnuche mgbasa ozi dị n'elu ụlọ. Otu okpu kpuchie elu ya bu nke nwere ulo di iche.
Ihe oru ngo a bu maka ulo eji okpukpu dicha nari puku iri na ise n’ogidi.
Mgbe ọnwa ole na ole nke mkparịta ụka na mbọ dị na ngalaba R&D nke ọrụ anyị na Germany, ụdị ọhụrụ anyị na-akpọ,
A mụrụ Silent Roof Ihe (CSRM) agba.
Ugbu a, jiri elu ụlọ gị mee ihe maka mkpọsa NA kpoo mkpọtụ mmiri na-akpasu iwe n'otu oge na mgbanwe pụrụ iche nke Silent Roof.
AJỤJỤ: Nwere ike otu ngwa ego maka nke ọzọ?
Ntinye ntinye na-amalite site na oyi akwa nke agba a họọrọ, akara ụlọ ọrụ ahụ na-ebipụ akwa oyi akwa nke CSRM ma chekwaa na isi akwa. Anyị nwụnye ụlọ ọrụ nwere ike inye a echichi ọrụ n'ụwa nile. You nwere ọnọdụ nke nwere ike irite uru na ọhụụ ọhụrụ a? Maka ụlọ elu, mgbasa ozi kpọtụrụ US ugbu a maka ozi ndị ọzọ.
Kedu ka o si arụ ọrụ ... Ntị bụ nkwenye
Kedụ ka m ga - esi kwụsị mkpọtụ mmiri ozuzo bụ ajụjụ a na-ajụkarị I nweghị ike ịkwụsị mmiri, mana Silent Roof ga -eme ka mkpọtụ mmiri ghara ịsụda.
Obere vidiyo dị obere na aka ekpe gosipụtara na-emetụta arụmọrụ nke mmiri ịdabere na elu nke metal.
Nke a na - eme ka mkpọtụ mmiri na - enweghị abaghị uru nke ikpuchi Silent Roof n'elu mmiri siri ike. CHETA, welite olu ngwaọrụ gị tupu ịpị bọtịnụ egwu ahụ. Ọ bụ ụda ụda nke nwere mmasị yana vidiyo.
Industrylọ Ihe nkiri - Gaa Leta Blog anyị
You so na Industrylọ Ọrụ Ese Egwuregwu?
Mmiri ozuzo Noise ọ bụụrụ gị nsogbu? Anyị nwere azịza maka etu esi akwụsị mkpọtụ mmiri ozuzo.
Nnukwu anụ ụlọ '
N'oge opupu ihe ubi nke 2018, anyị natara ajụjụ jụrụ: -
“Ndewo… Nke a nwere ike ịbụ ihe nzuzu. Enwere m nnukwu ụlọ nkwakọba ihe anyị chọrọ igosipụta site na mmiri ozuzo na anyị enweghị ike ịwụnye ihe ọ bụla n'ime ya ka usoro mkpuchi ihe anaghị arụ ọrụ. Enwere ike itinye ihe mkpuchi Silent Roof gị n'èzí na elu ụlọ nkwakọba ihe igwe biko? ”
Ajuju a bilitere n'ime nrụnye mkpọlite ​​Silent nke mbụ metụtara ụda olu n'ime ụlọ ọrụ ihe nkiri. Ọ mezuru na 'nnukwu ụlọ nkwakọba ihe' AKA Nnukwu anụ enwetara n'ụlọ idobe ihe nkiri. Nke a bụ usoro nke Sky Atlantic ga-ewepụta na 2019. Silent Roof wepụtara azịza maka nsogbu nke mkpọtụ mmiri ozuzo na-esite na ụlọ elu siri ike. Noiseda mmiri ozuzo ga-emetụta ọrụ ndekọ nke ndị na-eme ihe nkiri na setịpụrụ n'okpuru ụlọ nkwakọba ihe. Ihe ịga nke ọma bụ nwụnye a na nyocha ndị ọzọ sochiri ụlọ ọrụ ihe nkiri. Na mbido afọ 2019, ihe ọhụrụ Sam Mendes rụpụtara '1917' site na Storyworks etinyela aka na Silent Roof Ltd iji nye, Rain Noise Reduction Technology na ebe eserese na mpaghara Salisbury nke UK.
Silent Roof na USA
Moffett Production nke dabere na USA ma ejirila ngwaahịa anyị na ụlọ ihe nkiri ha dị na Houston, Texas. Anyị ga-eji ọmịiko nyochaa ahụmịhe Moffett Productions.
You nwere ọnọdụ yiri nke ahụ? Kpọtụrụ Anyị - Anyị nwere ihe ngwọta - Enweghị mkpọtụ mkpọtụ mmiri ọzọ.
Ndị ọkachamara TV STUDIO GROUP Ltd bụ ndị na-adịru nwa oge, usoro ime ihe eji arụ ọrụ, usoro ọgwụgwọ na mmemme mmemme n'ụwa niile. TV na Ihe nkiri Studio Group bụ ndị ọkachamara na ntinye ihe na-adịghị mma, ọgwụgwọ acoustic, ụlọ ntanetị, na-ewu ụlọ na-adịgide adịgide na ihe owuwu nwa oge dịka; ebe a na-eme mmapụta, ebe a na-eme ihe mma, ime ụlọ iri nri na ụlọ ndị ọzọ. Ahụmahụ ha na ọrụ aka ha na-eme Ụlọ ọrụ TV Studio Group Ltd. ihe zuru oke zuru oke maka ịwụnye Silent Roof ihe ma ha etinyela SRM n'ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe, ọba, TV na Ihe nkiri ụlọ ihe nkiri ma bụrụ ndị na-atụ aro ka a na-etinye SRM.
Ihe nrụnye gara aga nke Silent Roof ihe gụnyere ọtụtụ ihe nkiri na ihe ngosi onyonyo; '1917' Sam Mendes Movie, The Batman na Leavesden Studios, HS2 vidiyo nchekwa na ọtụtụ ndị ọzọ, pịa ebe a Iji lelee ozi ndị ọzọ banyere nrụnye ụlọ dị jụụ na-adịbeghị anya na ụlọ ọrụ ọzụzụ HS2 na Brackley na London Film Studios.
Silent Roof - Nwụnye arụchaala
N'oge na-adịbeghị anya, anyị enwetara usoro nrụnye
usoro ebe obosara dị ma ọ bụ rụọ ọrụ n'ịdị elu bụ
nke. Ihe oyiyi dị n'aka nri bụ ihe mkpuchi nwa oge nke ọba
ejiri mee ihe nkiri maka Sam Mendes WW1 epic '1917'.
Ihe pụrụ iche nke dị n ’okwu dị nfe na-akụda mmiri zoro ezo na elu mmiri dị larịị, mmiri ozuzo na-agafe n’elu larịị ahụ, na-agazie n’elu elu mmiri mbụ ahụ wee banye n’ime mmiri mmiri mmiri.
Ihe Silent Roof material a na-edozi UV. N'ihi ngbanwe Njirimara nke ihe a nwere ike iji ya mee ihe n’elu ala ọ bụla ma ọ dị larịị. Anyị esiwo ụzọ dị iche iche esi echekwa ihe dị iche iche.
A na-ebufe anyị mkpọtụ mmiri ozuzo n'ụdị ebili mmiri. N'oge mmiri ozuzo, a na - ewepụta ọtụtụ ikuku metụtara mmiri ozuzo n'elu ụlọ. Ihe owuwu ụlọ dị ugbu a ga-arụ ọrụ dị ka ihe na-eme mkpọtụ na-arụ ọrụ ụfọdụ mana ikekwe njikwa mkpọtụ mmiri ozuzo abụghị isi ihe dị mkpa mgbe a rụchara ụlọ ahụ. Mgbe a na-anwa ịme mkpuchi ụlọ iji gbochie mkpọtụ mmiri ozuzo, ihe mbụ ị ga-atụle ga-abụ ịgbakwunye ihe ndị acoustic iji lụso ụda nke ụda olu (ụda mmiri), nke na-esite na ụlọ. Ihe owuwu ọ bụla ga-ama jijiji n'ụfọdụ igwe, ihe mkpuchi ụlọ ga-abụ ọla ma ọ bụ mejupụtara ga-akpa agwa dị ka akpukpo anụ ma mgbe emetụtara ya ga-ewepụta ụda. Ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya iwebata ihe ndị a na-agwọ na-eme iji dozie nsogbu mkpọtụ a.
Approachzọ usoro a ga-agbakwunye uka n'elu ụlọ. Anyị niile maara nke ọma na oke ụlọ ma ọ bụ mgbidi ga-egbochi mgbasa nke mkpọtụ (ebili mmiri). Ya mere, mee ka elu ụlọ ahụ dịkwuo elu iji belata ụda mkpọtụ nke mmiri ozuzo na-eweta, nke a ọ́ bụghị azịza doro anya? Iwu a kacha mara amara na-ada ụda bụ Mass Law. Nke a na - ekwu na site na ịbawanye ibu nke ihe mgbochi ị ga - enweta dị ka mmelite 6dB na ụda ụda. Yabụ, ọ bụrụ na ị okpukpu abụọ nke mgbidi brik, dịka ọmụmaatụ, ị ga-enweta gburugburu 30-40% mmelite na mkpuchi ụda. N'otu aka ahụ, nwere elu ụlọ, mana ugbu a, anyị ga-atụle ntinye ọzọ anyị na-aga iwebata, ụlọ ahụ ọ nwere ike ịkwado mgbakwunye ọzọ a na ego ole ọ na-ewe na mbọ a?
M OR KWES SHR WE ANY PR N'AGBARA Nsogbu a DARA EGO DARA?
A na-echeba ịba ụba n'okirikiri ụlọ iji lebara nsogbu nke mkpọtụ mmiri MGBE ọ mechara. Uzo ozo a gha eme bu igbochi oke udu mmiri tupu o ruo? Ihe Silent Roof Material (SRM) na-eme nke a dịka esi tinye ya na Mpụpụ ụlọ nke dị n'elu ụlọ dị adị na-egbochi mmiri na-ezo. Ọzọkwa, SRM na-ebu naanị 800gms kwa square, ụlọ ọ bụla nke ụlọ kwesịrị inwe ike ịkwado mgbakwunye a. Yabụ kama ịgbakwunye uka, kedu ka ụzọ Silent Roof ga-esi rụọ ọrụ?
Silent Roof Material (SRM) bụ ngwaahịa pụrụ iche nke na-eji nwayọ nwayọ nwayọ dara mmiri na-ada ada n'elu mmiri dị mma na-enweghị ibugharị ụda mkpọpụta a rụpụtara na elu ụlọ dị n'okpuru. Mmiri mmiri ozuzo wee si na oghere nke SRM na-agbadata jiri nwayọ gaa na elu ụlọ mbụ ahụ wee banye na mmiri mmiri mmiri. Silent Roof ga-eme ka ọtụtụ mkpọtụ mmiri na-ada n'okirikiri ọ bụla wee na-eme mkpọtụ. Ngwa a dị oji na agba, a na-edozi UV. N'ihi ngbanwe Njirimara nke ihe a nwere ike iji ya mee ihe n’elu ala ọ bụla ma ọ dị larịị. Anyị esiwo ụzọ dị iche iche esi echekwa ihe dị iche iche.
'Ihe Silent Roof bụ ihe na-agbanwe agbanwe, nwere ọtụtụ akụkụ, nke esiri na polyamide filaments jikọtara ọnụ ebe ha gafere iji wuo ụlọ siri ike ma na-emeghe. Ọ nwere azụ azụ nke dị n'otu akụkụ mepụtara site na filaments na nhazi usoro akụkụ abụọ nke a na-agbanye na temameta n'ọtụtụ akụkụ.
Ejiri kpuchie ụlọ ọgbụgba profaịlụ kpuchie kpam kpam nke ihe eji agba aja ojii mechie ọnụ, ogologo ya ka echebere ka ọ bụrụ agbataobi ya na ntinye ya. N'ihi mepere emepe lattice nke ihe ahụ ọ na-ewepụta ntakịrị nguzogide ikuku, yabụ na-emetụta ọnọdụ ihu igwe.
Itughari - Akụrụngwa Pụrụ Iche
Enwere ike ibugharị Silent Roof. Ntughari nka bu ihe ndi apuru iche nke Silent Roof Material (SRM). Mgbe ịzụrụ ọnụego SRM ọ bụla, ị na-eme ya na ịmara na enwere ike ibugharị ya na ụlọ dị iche dịka yana mgbe ịchọrọ. Nke a abụghị ikpe ọ bụla maka ọgwụgwọ ndị ọzọ ejiri rụọ ọrụ iji belata mmetụta mkpọtụ mmiri na-arụ na ụlọ ụlọ.
Usoro a na-emebu bụ ịgbalị belata ọkwa nke mmetọ MGBE o mere site na ịtinye akwa mkpọtụ mbelata sọọsọ (s) dịka ọmụmaatụ n'ọdọ ụlọ ahụ.
Egwuregwu Silent Roof nke etinyere na mpụga nke ihe eji arụ ụlọ, na-akwụsị mmiri mmiri ozuzo na-emetụta elu ụlọ ya wee belata mkpọtụ mmiri nke na-ebute tupu Ọ apụta.
Then nwere mgbe ị nwere ohere ịtụgharị SRM, bufee ya na ebe ọzọ ma jiri ya mee ihe yana ọ bụ mmiri mmiri na-ebelata akụrụngwa ọzọ, ọzọ, na ọzọ… Otu ịzụta, ọtụtụ ngwa.
Kedu ngwaahịa ndị ọzọ nwere ihe a nke iji ya eme ihe gbasara mmetọ mkpọtụ mmiri ozuzo? Iji mara anyị, Ọ DONEGH..
Foto dị n'aka nri bụ ebe a na-esi na Monster Roof dị na Southall nwetaghachi ihe ndị dị na Silent Roof ma tinyeghachi ya na ụlọ ochie Ignition na Wembley, foto dị n'aka nri bụ n'ihu na mgbe ihe mkpuchi Silent Roof dị na mbụ. dabara na ụlọ mgbanye ochie.
Emere ihe a niile n'ime ụbọchị 6 site na mmalite ruo n'isi.
Anyị dabere na ụsọ oké osimiri nke England, ma ị nwere ike ịnwe ọrụ n'uche ebe ọzọ na mpụga UK. Ọ bụrụ na ịnwee ọnọdụ ebe mkpọtụ mmiri si n'uko ụlọ na-emetụta ebe ọrụ ma ọ bụ ebe obibi dị n'okpuru, Anyị nwere ike ịhazi ịbupụ ihe mkpuchi Silent anyị na ọnọdụ gị ebe ọ bụla ọ nwere ike ụwa niile.
Allationwụnye ihe Silent Roof Rooti dị mfe n'onwe ya ma ị ga-eduzi ntanetị ma ọ bụ nkwado ekwentị iji zoo nzọụkwụ nke ụzọ niile.
A na-enye Ihe Nkịtị Silent (SRM) na bales 1 mita n'obosara ma ruo na nke kachasị mita 60 n'ogologo. Otu square mita SRM bụ 800g ma ọ dị 17mm. Enwere ike ịnye Bales tupu egbutu ya na ogologo ọ bụla ịchọrọ maka ọrụ gị ma ọ bụrụ na ọ dị larịị, maa ụlọ, gbọmgbọm profaịlụ.
Kpọtụrụ anyị ugbu a maka ozi ọnụahịa na nnyefe.
Naanị ụlọ ọrụ ole anyị nwere ma ọ bụ ndị anyị na ha na-arụ ọrụ ugbu a
Kedu ihe ịdị arọ nke ihe SR
Kedu ihe bụ ibu nke nrụnye Silent Roof? Ibu ibu nke ihe Silent Roof bụ naanị 800g kwa square. Ọ dịghị anabata ya, yabụ agaghị ejigide mmiri mmiri ka ọ gbakwunye na nbudata ya n'elu ụlọ enyere ya.
Kedu ihe bụ ụkpụrụ 'U' & 'R'
N'ihe gbasara ngwa ọrụ anyị nke gbachiri nkịtị, ụkpụrụ 'U' na 'R' nke ihe ahụ adịghị mkpa mgbe ị na-atụle ụdị ojiji ọ bụ iji belata mkpọtụ mepụtara site na mmiri ozuzo na-emetụta elu ụlọ. Achọpụtaghị ihe Silent Roof ka ọ bụrụ ngwaahịa mkpuchi mkpuchi.
U-factor na U-uru bụ okwu mgbanwe na-ezo aka nha nke ohere ọkụ ma ọ bụ mfu site na ihe site na ọdịiche dị n'etiti ime ikuku na elu ikuku nke ihe a na-ekwu. A na-ezo aka na U-factor ma ọ bụ U-uru dị ka mkpokọta mkpokọta nke inyefe okpomọkụ. A ala U-uru na-egosi mma mkpuchi ihe Njirimara. Ogwe ndị ahụ bụ Btu / (hr) (ft2) (Celsius F). Ezubeghị Silent Roof ihe ọ bụla ka ọ bụrụ ihe mkpuchi na ya mere ọnụọghị ọnụ ahịa akụrụngwa 'U'.
Mpempe akwụkwọ Ngwaahịa / Mpempe akwụkwọ
Pịa ebe a maka otu pdf
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji wụnye
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji wụnye Silent Roof. Mgbe etinyere na Profaịlụ Metal Roofing (PMR) na ihe ndị yiri ya, a na-atụgharị ihe mkpuchi Silent (SRM) n'elu ụlọ site na eave ruo elu na n'elu ugwu. 'Nzọcha' nke ọ bụla ga-adị 1m n'obosara. A na-agbatị eriri nke ọzọ n'akụkụ nke mbụ wee 'dọọ' ọnụ site na iji eriri USB. Mgbe ahụ, a na-atụgharị warara a ka ọ dinara n'akụkụ agbata obi ya ma megharia usoro a. Iji usoro a nwere nnukwu ụlọ nke SRM nwere ike kpuchie na obere oge dịkarịsịrị 60 square mita kwa elekere na otu egwuregwu abụọ nwere ụdị.
Oge nnyefe Roofe Silent
Oge nnyefe Silent Roof sitere na mpaghara mmepụta ihe na ntọala UK anyị ga-ewe n'etiti izu 3 na 6 mgbe ị natasịrị nkwenye gị dabere na ọrụ ọrụ ugbu a.
Ndụ a tụrụ anya na Silent Roof
Anyị nwere nrụnye nke dị afọ iri ugbua na-egosighi akara ngosi nke emebi emebi. Iji nyere aka ihicha ogologo oge ọ bụla iji wepu irighiri ihe na matriks ihe.
Ị nwere ike ibudata Silent Roof Acoustic Report ebe a